မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....: စက္ကူရတုအား ဗာရာဏသီချဲ့ကြည့်ခြင်း
ကျွန်တော့်မေမေက ကျွန်တော် ဘာမဟုတ်တာလေးတွေကို ပုံကြီးချဲ့ပြီးလုပ်နေရင် “ဟဲ့ကောင်လေး..လုပ်စရာရှိ
တာ မြန်မြန်ထက်ထက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး....ရှောမွှေးတစ်ပင်နဲ့ ဗာရာဏသီချဲ့မနေနဲ့ ” လို့ ပြောတတ်ပါတယ်..။
ခုလည်း ကျွန်တော် ဘာမဟုတ်တာလေးကို ဗာရာဏသီချဲ့ပါတော့မယ်....:)
ကျွန်တော့်ဘလော့လေး ဒီနေ့မှာ တစ်နှစ်ပြည့်ပါတယ်...။နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်တွေကို တစ်နှစ်ပြည့်မှသည်
နှစ်တရာထိ ဘယ်နှစ်ဆို ဘာရတု...၊နှစ်ငါးဆယ်ဆို ရွေရတု...အစရှိသဖြင့် အခေါ်အဝေါ်လေးတွေရှိကြောင်း
ငယ်ငယ်က စာအုပ်ထဲဖတ်လိုက်မိတာပဲ...၊ခုတော့ တစ်နှစ်ပြည့်ကို စက္ကူရတုလို့ခေါ်တာနဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ
အလုပ်များတဲ့ ငွေရတုတို့၊စိန်ရတုတို့လောက်ပဲ သိတော့တယ်...၊ကျန်တဲ့နှစ်တွေကိုတော့သိတော့ဘူးရယ်...။
ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးလဲ ဒီနေ့ စက္ကူရတု ရတယ်ပေါ့......။ဒီတော့ ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ ဘာမှတော့
မဖြစ်ပါဘူး....၊အဲဒီ ဘာမှမဖြစ်တာကိုပဲ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင် ဗာရာဏသီ ချဲ့ရတာပေါ့ဗျာ.....:)))
ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်ရာ ဟောဒီ ဘလော့ဂိုစဖီးယား ဆိုရှယ်နက်ဝက်ကမ္ဘာလေးကို ကျွန်တော်ကတော့
ရွာလေးတစ်ရွာလို့ပဲမြင်မိတယ်ခင်ဗျ....။အပြင်အပက ရွာလေးတွေလိုပါပဲ...ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ တခါတခါ
ရန်ဖြစ်ကြ၊ပြန်ချစ်ကြ၊သူ့အိမ်ကလေး ခြံမလုံလို့၊နောက်ဖေးအဖီလေးပြိုပျက်နေလို့ ကူပါဆိုရင်လည်း တတ်သ
လောက် ကူညီကြ၊တစ်အိမ့်တစ်အိမ် သတင်းစကားလေးတွေ မျှဝေကြ(အမှန်က အတင်းပြောတာ...:)))
အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ တေးသံသာလေးတွေစီစီညံညံ၊တချို့အိမ်တွေကတော့တရားသံတွေနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူး...၊
တချို့တွေက ဗီဒီယိုတောင်ဖွင့်ပြလိုက်သေး...:)။အဲ...တစ်ချို့ကျတော့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ ချက်ပြီး
လာသမျှလူကို စေတနာထက်သန်စွာ ချကျွေးတတ်ကြသဗျ...။
တချို့ကြတော့ အိမ်ရှေ့ကနေဆီးပြီး တို့အရေး...တို့အရေးတွေအော်တော့ ကိုယ်ပါ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်
ဝင်အော်မိတာပေါ့.....၊၊အဲ...မကျေနပ်တဲ့သူတွေက အဲ့အိမ်ကို ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်တော့ ကိုယ့်ထိမှာစိုးလို့ အသာလေး
ပြန်လစ်လာရသေး....:D။တချို့အိမ်တွေမှာ သူတို့သန်ရာသန်ရာဗဟုသုတရဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို
ဆွေးနွေးနေကြရင်တော့ ကိုယ်က ဝင်မဆွေးနွေးနိုင်လို့ တိတ်တိတ်လေးပဲ နားထောင်နေရသပေါ့လေ...။တချို့
ကျတော့ သူတို့ကြုံတွေ့သမျှ ဝမ်းနည်းစရာ၊ဝမ်းသာစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကို တစ်ဖွဲ့တစ်နွဲ့ပြောပြ တတ်လိုက်ကြတာ...နားထောင်သူမှန်သမျှ ထိထိခိုက်ခိုက်လေးဖြစ်လို့....။တချို့တချို့တွေရဲ့အိမ်တွေက လူကုံ
တန် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေ....၊တချို့ကတော့ သာမန်....။
ရွာထဲမှာ တစ်ခါတစ်ခါ ရွာသား အသစ်အသစ်တွေလည်းရောက်လာကြလို့ ဝမ်းသာရသလို၊နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ
သွားသူတွေ၊နှုတ်မဆက်ပဲ တိတ်တိတ်လေးပြောင်းသွားကြသူတွေ၊ထာဝရခွဲခွာသွားကြတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း
စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်....။အဲ...တချို့တချို့များကတော့ ရွာလေးနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုဝေးကွာတဲ့နေရာ
ကိုရောက်သွားကြပြန်တော့ ချစ်လျက်နဲ့ မတတ်သာ ခပ်ခွာခွာလေးနေကြရသပေါ့.....။
အဲဒီရွာလေးရဲ့ ချောင်လေးတစ်ချောင်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က အိမ်ပေါက်စလေးတစ်အိမ်ဆောက်ပြီး ကျွန်တော်
လည်း ရွာသားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ခံယူခဲ့ပါတယ်...။ရောက်လာခါစ မအူမလည်လေးကို နွေးနွေးထွေးထွေး
ကြိုဆိုကြတော့ ဝမ်းသာ၊ကျေးဇူးတင်မှုတွေက အတိုင်းမသိ...။အိမ်လေးရဲ့လိုအပ်တာလေးတွေကိုလည်း ပြောပြ
ကြ၊ညွှန်ပြကြ....။သိပ်ကို စိတ်သဘောထားပြည့်ဝကြတဲ့ ရွာသားတွေပါပဲ....။
ကျွန်တော့်အိမ်လေးကိုလည်း လမ်းကြုံရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်လည်ရင်း မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပျင်းလို့ပဲ
ဖြစ်ဖြစ်၊ခင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလည်အပတ်လည်း လာတတ်ကြ၊ရောက်တတ်ကြပါတယ်...၊ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော်ကတော့ ဝမ်းသာရတာပါပဲ....။ဒါပေမယ့် သူများတကာလို့ အာဟာရပြည့်ဝစေတာတွေနဲ့ ဧည့်မခံနိုင်
တော့လည်း ကိုယ့်ရှိတာလေးနဲ့ပဲ ဧည့်ခံရပါတယ်..၊ကိုယ်က ဧည့်ဝတ်မကျေပေမယ့် လာကြသူတွေက ညိုညင်
စကားပြောမသွားတဲ့အပြင် အားပေးစကားလေးတွေပြောပေးသွားကြတာကိုကလည်း ရွာလေးရဲ့ချစ်စရာ ဓလေ့
စရိုက်ကလေးတစ်ခုရယ်ပါ....။ဒီအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်စကား ထပ်ပြောပါရစေ...။
ကိုယ့်အိမ်လေးမရှိခင်ကတည်းက ရွာထဲကို အလည်ထွက်လေ့ရှိပါတယ်...။အဲ့လိုလည်လည်ထွက်ရင်းကပဲ ရွာထဲ
မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးရှိချင်လာတာပါပဲ....၊ဟော...ရွာသားလေးဖြစ်လာတော့ အိမ်လည်မထွက်ရမနေနိုင်....။
အိမ်လည်ထွက်ရင်လည်း ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ရတာအမော....။ကိုယ်ဆီလာလည်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊
မလာဖြစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ အလည်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်....။များသောအားဖြင့် မှတ်ချက်စကား
အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့အခါမယ် အများအားဖြင့် ကောင်းတယ်၊လှတယ်၊တော်တယ်...စသဖြင့်ပဲ ပြောဖြစ်ပါတယ်...။အဲ...
အိမ်ပိုင်ရှင်ဧည့်ခံတာတွေမှာ လိုအပ်တာလေးတွေရှိနေရင်တောင် ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပါပဲ...။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ရွာသားအများစုဟာ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေ၊ကျွမ်းကျင်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး...။မိမိတို့ရဲ့ မိသားစုအရေးတစ်ဖက်၊
လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကတစ်ဖက်နဲ့ ဝါသနာပါလို့သာ ကိုယ့်ရှိတာလေးနဲ့ အစွမ်းကုန်ဧည့်ခံကြရတာပါ...။လှတဲ့အခါ
ကျွန်တော့်အိမ်လေးကိုအလည်လာသွားကြသူတွေရဲ့ အားပေးမှတ်ချက်စကားလေးတွေဟာ ကျွန်တော်နောက်
ထပ် စာတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ တွန်းအားတွေဖြစ်လာတာကို သတိထားမိတဲ့နောက် ကျွန်တော်အိမ်လည်ထွက်ခဲ့ရင်လည်း
ဗာရာဏသီ ရဲ့ နိဂုံး.....
ကဲ....အစကတည်းက ပြောခဲ့သလို ဘာမဟုတ်တာလေးကို ဗာရာဏသီချဲ့လို့ပြီးပါတော့မယ်...သည်းခံလော့ ပိတ်သက်ကြီး....:)))။ပြောရရင် ဟောဒီရွာထဲမှာ နေရတာ ပျော်ပါတယ်...၊စိတ်လည်းချမ်းသာရပါတယ်..၊
ရသလေးတွေရေးဖို့ ကျိုးစားနေပါတယ်....(မြန်မာပြည်ရသစာပေ သေတာကြာပြီ ခုမှထပြီး ရသမနေနဲ့ အရင်ဆုံး
ရသစာတမ်းကိုဖတ်ကြည့်ဦး လို့ မြည်တွန်တောက်တီးရင်လည်း ငြိမ်နေရတာပါပဲ...)။နောက်ဆုံး ကဗျာလေးနဲ့
နိဂုံးကမ္ပတ် အဆုံးသတ်ပါတယ်...။(များလိုက်တဲ့ကဗျာဆြာတွေ၊အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကဗျာဆြာအများဆုံး
တိုင်းပြည်ထဲက ကဗျာဆိုတာတောင်ဘာမှန်းမသိပဲ ထထပြီး ကဗျာ တဲ့လူလို့ မချိတင်ကဲပြောရင်လည်း.....
စက္ကူစ တစ်ရွက်လို ပါးလှပ်လှပ်ပါပဲ.....။
ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ခဲ့....။
ကိုယ့်အတွက်တော့ ကိုယ်တိုင်ရေး မှတ်တိုင်များ လေလား.......။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါ....ရင်ထဲမှာ မြစ်ဖျားခံတာ....။
စိတ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပဋိပက္ခ အတွက်....
ရင်ဘတ်ထဲက ရွာချခဲ့တာက ရှစ်ဆယ်နှစ်......
Posted by ညိမ်းနိုင် at 6/15/2011
အားလုံးကောင်းတယ် ရွာသားလေး ။ တစ်ခုပဲ ရွာထဲက စီနီယာတွေကို တစ်နှစ်ပြည့် မီးထွက်လုပ်တာ ဘာစားစရာမှမပါ ဖိတ်စာလေးတောင် နာမည်မတပ်တာ တစ်ခုလေးပဲး))
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နှစ်ဆိုတော့ လမ်းတော်တော် လျှောက်တတ်ပြီးပေါ့ တွန်းရင် ရှောင်တတ်ပါစေ ကြား ၃ ကြားမပါနဲ့ ပေါ့ကွယ် ဒါပဲ မှာချင်တယ် အောင်မြင်ပါစေ ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
၁နှစ်မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ဗာရာဏသီ ဆက်ချဲ့နိုင်ပါစေသောဝ် :D
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ :P ၁နှစ်ပြည့် :D
ယနေ့မှ စ ... နှစ်တစ်ရာတိုင်ကွယ်...
ဘလော့ဂ်.......အတင်းအဖျင်းမုန် တိုင်းတွေ ကြမ်းပစေ....
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပါစေလို့
ဆန္ဒပြုရင်း..Happy birthady ပါအကိုရေ...
သူများအိမ်တွေကို သွားလည်တဲ့အခါ အိမ်ရှင် ရွာသားတွေရဲ့ ဧည့်ခံမှုအပေါ် နားလည်ပေးတဲ့ စိတ်ထားလေး လှတယ်၊ တစ်နှစ်ပြည့် အိမ်ကလေး ဆက်လက်ပြီး အဓွန့်ရှည် ခိုင်မြဲပါစေ..၊ လေဒဏ်မိုးဒဏ် ခံနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်း တိမ်စုတို့ နားခိုရာ ဖြစ်ပါစေဗျာ...။
မိုက်တယ်ဗျို့ေ၇းတတ်တယ် အင်း တနှစ်ပြည့် ကနေ နှစ်ပေါင်း များစွာ အထိ ရွာထဲက မိတ်ဆွေ ကောင်း တွေ အဖြစ်နေသွားကြတာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ တခါတလေတော့ အကျွေးအမွေးလေး နဲ့ ဧည့်ခံသင့်ပါတယ်
အော် တစ်နှစ်သားကလေးဆိုတော့ မတ်တပ်စမ်းရောပေါ့။
နောက်ဆို တောက်တောက်ပြေးတော့မယ်။ လူကြီးတွေ ပင်ပင်ပန်းပန်း ထိန်းကျောင်းရတဲ့ အရွယ်ရောက်တော့မယ်ဘဲ :P (just kidding !!!)
Happy Birthday! ပါရှင်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ပြီးလဲ စာကောင်းပေမွန်များကို ရေးသားနိုင်ပါစေ။ ဘလော့ဂ်ကလေး ကျန်းမာစွာ အသက်ရာကျော်ရှည်လို့ တည်တံ့နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။
ဗာရာဏသီချဲ့ပြီး သာဝတ္ထိချဲ့ဦးမယ်ထင်ပါ့။ သူပြောမှဘဲ ကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်ပါ့။ တကယ့်ရွာကြီးလိုပါဘဲ။
တစ်နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ အတွေ့အကြုံ အတော်စုံလောက်ပြီ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရေးချင်တာလေးတွေ ရေးနေရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာပါလေနော
ဆက်လက်ပြီး ရေးချင်တာလေးတွေရေးပြီး ဘလော်ဂါချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုလေးတွေ တည်ဆောက်ကြပါစို့လို့
တစ်နှစ်ပြည့်မှသည်...............နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ များစွာ တိုင်ပါစေ
ကျွန်တော်လာလည်တဲ့အချိန်က တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရလေး ဖြစ်နေပါရောလား.. အစ်ကို့ခြေရာလေးတွေချန်ခဲ့ပေမယ်လို့ ခုမှ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော် စိတ်တွေလေနေလို့ လုပ်ချင်ရာတွေပဲ လုပ်ချင်နေသလိုလုပ်နေတာမို့ ဧည့်ဝတ်မကျေတာတွေကို ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ.. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ.:)
Wish you and your blog all the best.
တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ အိမ်လေးကို အိမ်နီးနားချင်းအိမ်ဖြစ်တဲ့ ငွေလမင်းကလည်း လာလည်ပါတယ်
ကဗျာလေး ရေးထားတာလဲ ကောင်းပါတယ်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် တည်တံ့သော အိမ်လေးဖြစ်ပါစေ
Happy ONE Year :)))
မံရိုး>>>အဲ့လို အတည်အခန့်ကြီးတွေ မပေါနဲ့လေကွယ်..:)
ခက်တာက ဘာနဲ့ ဘယ်လို ဧည့်ခံရမှန်းကိုမသိတာ..၊
မအိမ်သူ>>>ဟုတ်ပါ့ နောက်ဆို တောင်သွား၊မြောက်သွား
တွေဆိုတော့ ဟင်းကောင်းချက်ရင် အသံပြုနော်...:)))
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဗာရာဏသီချဲ့ ဘလော့နိုင်ပါစေ။ တစ်နှစ်ကို သုံးခါ ဘလော့နာမည်ပြောင်းသူ မောင်လေးကို မေ့ပါဘူးဗျား)))
အပေါ်က ကွန်မန့်မှာ “ရွာသား”လို့ ရေးတာပါး))
ဘလော့ဂ်သက်တမ်း ၁နှစ်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ နောင်လာနောင်သားများအတွက် သမိုင်းမှာ ကျန်ရစ်စေမည့် ဗဟုသုတတွေ မျှဝေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော်..
ပြည့်သွားပလား.. စက္ကူရတု.. :P,.,. ဒါကို ဒါလို့ခေါ်မှန်း ခုမှကြားဖူးတယ်.. အံ့ရော... ကိုရင်ရွာသားလေး ကိုငြိမ်းနိုင်.... အဲလေ.. ကိုညိန်းနိုင်.... (အသံထွက်ဘာကွာတာလဲတော့မသိဘူး.. )... ရှုပ်ပါတယ်.ကိုမောင်လေး.. :P... ဒီတစ်နှစ်အတွင်း ဒီရွာထဲမှာပျော်လား..... ဟဲဟဲ....ဒီ့ထက်မကပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.... ဆုတောင်းပေးတယ်နော်..း)))))
တွန်းပေးတဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း မမေ့ပါဘူး....:))))
အမှတ်တရ နေ့စွဲများ... said...
သြော် လက်စသတ်တော့ မောင်လေးက ညိမ်းနိုင် ဖြစ်သွားတာကိုး။ မောင်လေးညိမ်းနိုင်ရဲ့ မျောလွင့်နေတဲ့ တိမ်ကလေးရဲ့ စက္ကူရတုမှသည် ငွေရတု ရွှေရတု စိန်ရတု ရတုများစွာ တိုင်ပါစေသား ... ဆက်လက်၍ ဗာရာဏသီအပြင် နေပြည်တော်ပါ ချဲ့နိုင်ပါစေ ... :))
"Happy Paper Anniversary"
သိကြားမင်းက မနေနိုင်တော့လို့ မိုးကြိုးလှမ်းပစ်ရင် ကိုယ်
တနှစ်ပြည့်မှစပြီး ရေးနိုင်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ရွာလေးထဲမှာ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
တစ်နှစ်ပြည့် ဆိုတော့ အူဝဲပဲ သိမယ်ထင်လို့ ပါ။
:D စတာနော်။ အိမ်တွေ လည်ပေမယ့် စာမရေးဖြစ်ဘူး။ အိမ်စေ့လည်း မလယ်ရသေးဘူး။
ဟယ်.. ဘလော့ဂ် တနှစ်ပြည့်သွားတာ သိတောင်မသိလိုက်ဘူး။ နောက်ကျမှ ရောက်လာတာ ဆေရီးပဲနော့်။ တနှစ်ပြည့်မှသည် စိန်ရတုတိုင်အောင် ဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။